MBAA Results | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
← The Sketch of Skies
Myanmar Boycott Since A Long Time, But China Just Start →
January 12, 2009 · 11:42 am
လူပြောများနေတဲ့ ဘလော့ဂ်အကယ်ဒမီစာရင်း ထွက်လာပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဆုပေး မဲပေးဆိုတာထက် စစ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ ပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။
မဲ ၇၇၀၀ အနက်မှာ ၃၀၀၀ ကျော်လောက် ပယ်မဲဖြစ်တာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ကွန်ပြူတာကို မျှသုံးရလို့ ပရောက်ဇီကျော်ပေးသလား၊ နှောက်ယှက်ဖို့နဲ့ ပညာစမ်းဖို့ပဲ ကျော်ခွပေးကြသလားတော့ မသိနိုင်ပါ။ ပယ်မဲကြောင့် တချို့လည်း နံပတ် “တစ်”နေရာကနေ အနိစ္စသဘောနဲ့ ရွေ့လျောသွားကြပါတယ်။ တချို့က ပယ်မဲထိသော်ငြားလည်း ပိုနေမြဲ ကြားနေမြဲ တွေ့ရတယ်။
အကယ်ဒမီရဲ့ အားနည်းဆုံးအချက်ကို ပြောဆိုရင်တော့ အမျိုးအစားခွဲခြင်းနဲ့ စာရင်းပြုခြင်းလို့ ပြောရမှာပါပဲ။ ပါသင့်တဲ့ ဘလော့ဂ် အတော်များများ မပါဝင်ခဲ့ကြဘူး။ (အချို့လည်း ကာယကံရှင် အလိုကျ မထည့်တာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျနော့်ဘလော့ဂ်လည်း မပါခဲ့ပါဘူး။) ကိုယ့်ဘလော့ဂ် မပါပေမယ့် တင်သလောက်ကို မဲပေးသူတွေလည်း ရှိပုံရပါတယ်။ ကျနော် မထင်မှတ်တဲ့သူတွေလည်း တစ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ ရသစာပေမှာ အချိန်တိုအတွင်း ‘ပေါက်’သွားတဲ့ ကိုနဗနကို မှန်းခဲ့ပေမယ့် ကိုမင်းဒင် ပရိသတ်က ပိုများခဲ့ပါတယ်။
သတင်းဆိုဒ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ခွဲ လက်စောင့်ထားဟန်ရှိတဲ့ ခေတ်ပြိုင်ဘလော့ဂ်က သတင်းမှာ တစ်ချိတ်သွားပါတယ်။ ပယ်မဲအခွဲမှာ ဖွဲ့တည်ရာက အီး-ဂျာနယ်ကို ကျော်ဖြတ်သွားတယ်။ အဖွဲ့သားတွေ ဝမ်းသာကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် Migrant တွေအရေး တစိုက်မတ်မတ်ရေးခဲ့တဲ့ ပိုကောင်းမယ့် မနက်ဖြန်က တစ်ချိတ်တယ်။ (မနေ့က သူ့ဆိုဒ် သွားကြည့်တော့ သားသားနားနားနဲ့ စမတ်ကျနေတာ တွေ့ရတယ်။)
မဲအရေအတွက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာဘလော်ဂါနဲ့ ဘလော့ဂ်ဖတ်သူတွေ ဘယ်လိုစာမျိုးတွေ အာရုံကျနေကြတာဆိုတာလည်း ခန့် မှန်းမိပါတယ်။
အောက်မှာ စာရင်းအကျဉ်းကို ကူးတင်လိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေ နောက်ထပ်ညံကြဦးမယ်ဆိုတာတော့ သံချောင်းခေါက်ကြရင် သိမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ကျမ်းပရိုဆယ် Approve ခုမှ ဖြစ်လို့ သူတော်တလှည့် တုံးတလှည့် ချာချာလည်ဖို့ ရှိနေပါကြောင်း။
(၁) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေး ဘလော့ဂ်ဆု (Best Religious Blog)
မြတ် ဗုဒ္ဓအဆုံးအမများ ဘလော့ဂ်
(၂) အကောင်းဆုံး ပညာရေး ဘလော့ဂ်ဆု (Best Education Blog)
(၃) အကောင်းဆုံး နည်းပညာ ဘလော့ဂ်ဆု (Best Blog About Blogging)
(၄) အကောင်းဆုံး နိုင်ငံရေး ဘလော့ဂ်ဆု (Best Political Blog)
(၅) အကောင်းဆုံး သတင်း ဘလော့ဂ်ဆု (Best News Blog)
(၆) အကောင်းဆုံး ပရဟိတ ဘလော့ဂ်ဆု (Best Charity Blog)
ပိုကောင်းမယ့် မနက်ဖြန် ဘလော့ဂ်
(၇) အကောင်းဆုံး မြန်မာစာပေ ဘလော့ဂ်ဆု (Best Myanmar Literature Blog)
(၈) အကောင်းဆုံး ရသစာပေ ဘလော့ဂ်ဆု (Best Literauture Blog)
(၉) အကောင်းဆုံး ကဗျာ ဘလော့ဂ်ဆု (Best Poem Blog)
(၁၀) အကောင်းဆုံး အစုအဖွဲ့ ဘလော့ဂ်ဆု (Best Association Blog)
(၁၁) အကောင်းဆုံး အထွေထွေ ဘလော့ဂ်ဆု (Best General Blog)
(၁၂) ဘလော့ဂ်အားလုံး အတွက် မဲပေးခြင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
လက်ခံရရှိသော စုစုပေါင်း မဲအရေအတွက် – ၇၇၁၅ မဲ
ပယ်ဖျတ်ခဲ့သည့် မဲ အရေအတွက် စုစုပေါင်း ၃၀၄၆ မဲ
မဲပေးခဲ့သူပေါင်း – ၇၈၃၈ ဦး
မဲပေးရန်ကဏ္ဍပေါင်း – ၁၁ – ခု
မဲပေးခံ ဘလော့ဂ်ပေါင်း – ၁၇၀ – ခု
မဲစတင်ချိန် – ဒီဇင်ဘာ (၂၅) ရက်နေ့၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၊ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် (၀၇) နာရီ
မဲပိတ်သိမ်းချိန် – ဇန်နဝါရီ (၁၀) ရက်နေ့၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ည (၁၂) နာရီ
0 responses to “MBAA Results”
I read all posts on blogspot, iblogger and wordpress asarevenge.
I am happy with my revenge today as I gotalot from reading.
ကိုသင့္ေရ.. အကယ္ဒမီ ထင္ျမင္ခ်က္နဲ႕ အႀကံေပးေလး တင္ထားပါတယ္။ လာဖတ္ ေ၀ဖန္ေပးပါဦး
စာရိုက်ပုံ နည်းလမ်းတွေလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်း သဘောပေါက်လာပါပြီ။
စာတွေလည်း ဖတ်ရှုမှတ်သား သွားပါတယ်။
လုိအပ္ခ်က္အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာအေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္.. ဒီႏွစ္မွလဲ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ့ ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္ဗ်ာ..
ဒီနေ႔မွ uni code ရလို႕
သိပ်လဲ သဘောမပေါက်ဘူး စာရိုက်နည်းကို
“မွ” ဟောၾကည့္ မရၿပန္ဘူး
မ ဟထိုး ကို ရိုက်လို႔ မရဘူး